Baccarat Amathrendi - UK 2021 ✅
Home » Imidlalo Yekhasino » I-Baccarat » Baccarat Amathrendi
Ithrendi 1: Ababhange beStreaky kanye nabadlali
Ithrendi 2: iZigzag Zone
Ithrendi 3: iTrend Shintsha Ukwelashwa
Ithrendi 4: Isimo Sokundiza
Nansi indlela engcono kakhulu yokusebenzisa isu lapho ubhekene namathrendi
Uma kukhulunywa ngezimfihlo zokuwina umdlalo we-baccarat noma eminye imidlalo yasetafuleni, enye yezindlela ezithandwa kakhulu ukulandela izitayela ezithandwayo kakhulu ze-baccarat. Lokhu kungabonakala njengomsebenzi odinga abasebenzi abaningi kumdlali, kepha kubadlali abanesipiliyoni be-baccarat, ukuqonda izitayela kungaletha onqenqemeni. Gcina wazi ukuthi kumdlalo osheshayo weBaccarat, ukukhomba iphethini noma ukuthambekela uma umbukiso uyi-Banker enamandla noma i-Player streak noma i-Zigzag streak ingabeka noma ngubani ethubeni. Ngakho-ke nazi izitayela ezine ezithandwayo ze-baccarat okufanele wazi ezingakuholela ekuwineni etafuleni.
Lo mkhuba ovamile obonwa ngabaqalayo abaningi etafuleni le-baccarat, elihambisa imicu yababhange nabadlali. Qaphela lo mzila oqala kulayini wesithathu. Ngenkathi ungaphikisana nokuthi imigqa emibili yokuqala izoletha nemiphumela, kunconywa kakhulu ukuthi unake umugqa wesithathu uye phambili. Eyokuqala emibili ibhekwa njenge-blips yesikhashana, noma lena imiphumela yenguquko ezosetha i-streak.
Endaweni yeZigzag, umphumela ulandela indawo e-zigzag lapho kunezinguquko phakathi kwabadlali nababhange. Indawo ye-zigzag ivame ukuchazwa ngemiphumela yomugqa wokuqala nowesibili womdlalo. I-Zigzag Zone nayo ingaphuka futhi uma kwenzeka, ingaholela ekushayweni komdlali noma kweBhange, njengoba kuchaziwe kumkhuba wokuqala. Kepha uma ukuphambuka ohlangothini loMdlali noma lweBaker kungokwesikhashana nje, iZigzag Zone yiyona ndlela ehamba phambili.
Lo mkhuba uhluke ngokuphelele kwi-Player / Banker Streak ne-Zigzag Zone njengoba iphonsela inselelo isiphetho osenzile ngokuya ngokuhlaziywa kwakho. Lapha, kufanele wazi ukuthi iqhinga lokuthola ama-chips lapho udlala umdlalo we-baccarat lidinga ukwazisa ngazo zombili izingozi nemivuzo. Awukho umgwaqo ophelele obheke kuma-winnings. Ukudambisa ukulahleka, okudingeka ukwenze ukuqhamuka nokuphathwa kwemali okusebenzayo okungasiza ekuvikeleni nasekuvikeleni i-bankroll yakho. Elinye iqhinga ongalenza ukuthola elinye itafula ukuze ukwazi ukubona enye inkambiso engavuna i-bankroll yakho.
Kumathrendi amathathu okuqala, kunenkambiso ebonakalayo ekuqondeni kwe-streak, umkhuba weHovering State ngokusobala awunawo umuzwa wokuqondiswa. Ngamafuphi, imiphumela yetafula ayikwazi ukunquma nge-streak yangempela ezothathwa, noma ngabe ithanda i-Player / Banker, okusho ukuthi awukwazi ukulindela ukuphuma kwesitayela. Yize ingeke ivune i-Players / Bankers noma i-zigzag streak, nokho lokhu kubhekwa njengomkhuba nento okufanele ibhekwe futhi ifundwe nayo. Uma ubhekene nalolu hlobo lwe-streak, ukuzivikela okuhle kakhulu ukuthola ukulahleka kokuma. Futhi, ungahlala phansi, bese ulinda ukuthi kuqale esinye isicathulo, noma ungamane uthole elinye itafula lapho ungathola khona izitayela ezibonakalayo.
Lezi yizindlela ezine ezibalulekile zezicathulo etafuleni le-baccarat okufanele wazi. Ukuqonda mkhuba okhona kungakusiza ukuthi uthole inzuzo lapho udlala etafuleni. Njengesibuyekezo, uzohlangabezana nokuthambekela okungenani ezine etafuleni:
Ababhange beStreaky kanye nabadlali
Ukwelashwa kweTrend Shintsha
Uma ungadlala umdlalo we-baccarat mahhala, lapho-ke uzokwazi ukuzijwayeza ngalolu hlobo lwamathrendi ngaphandle kokufaka engcupheni i-bankroll yakho. Njengamasu wabaqalayo, kungakuhle ukudlala umdlalo mahhala.
Ukuze uthuthukise amathuba akho wokuwina, qiniseka ukuthi unaka izinhlobo ezimbili zokuqala zamathrendi. Ngaphambi kokuphothula ukubheja etafuleni, udinga ukuqinisekisa ukuthi ukuthambekela kucacile futhi sekusunguliwe. Qala ukuphothula ukuthambekela emphumeleni wesithathu ngoba lokhu kungakusiza ukuthi uze nokuhlaziywa okuqinile kokuqondiswa kwethrendi. Yisho ngokwesibonelo ukuthi umkhuba uya kumkhuba weZigzag, ongakwenza ngokulandelayo ukubeka amanzi akho kokuphambene nomphumela wokugcina. Uma imiphumela yokugcina ithanda iBhange, ngakho-ke kungcono ukuthi ubeke ukubheja ohlangothini loMdlali. Uma kwenzeka ulahlekelwa yilokhu kudlala, qhubeka udlale umkhuba kuze kube yileso sikhathi lapho ulahlekelwe khona kabili. Lokhu kusho ukuthi uma uhlangabezane nokulahlekelwa, yeka ukubheja usebenzisa isu. Uma uqaphele ukuthi kungumkhuba weStreaky Player / Banker, khona-ke kufanele njalo ubeke imali yakho kumphumela wokugcina, yisho uMdlali noma iBhange. Futhi, uma ulahlekelwa kabili kulolu hlobo lwendlela yokubheja, kuzodingeka ume.
Abadlali beBaccarat kufanele baqonde ukuthi kukhona izitayela zezicathulo emdlalweni we-baccarat futhi ukuqonda kwalokhu kungasiza ekunikezeni inzuzo
Kunezinhlobo ezine ezinkulu zamathrendi okufanele wonke umdlali azi: I-Streaky Banker / Player, iZigzag Zone, iTrend switch Treatment kanye neHovering State
Ku-Banker / Player streak, abadlali bangalindela uchungechunge lwemiphumela evuna ibhange noma umdlali ngasikhathi
Esikhathini seZigzag Zone, ukuthambekela kuhamba ngokuthanda umdlali kanye nebhange ngezikhathi ezithile
Ukukhulisa amathuba akho wokuwina, ochwepheshe bancoma ukuthi unake izinhlobo ezimbili zokuqala zamathrendi. Futhi ngaphambi kokuphothula ukubheja, kungcono uqinisekise ukuthi ukuthambekela kucacile futhi sekusunguliwe